လေနုအေး: ဒဿ၊သားစိုး၊ ဖိုးချစ် နဲ့သား
Posted by တန်ခူး at 5:36 PM
ညီမတို့ငယ်ငယ်က (သားလောက်တော့မငယ်ဘူး )
၃ တန်းလောက်က ချစ်ဦးညိုရဲ့ "လကာင်္ဒီပ ချစ်သူ"ရုပ်ပြကာတွန်းအထူကြီးဖတ်တော့လည်း ဒဿဂီရိကိုပဲ သနားသွားမိတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ရာမက မင်းသားမဟုတ်ပဲ ဒဿက မင်းသားလိုဖြစ်သွားတယ်
စာနာတတ်တဲ့ နှလုံးသားက သားမှာ ရှိနေတာကိုး...
အမသားက အနုပညာခံစားချက်ရှိပုံပဲ... ကြီးလာတော့မှ နှစ်ကျပ်ခွဲ တို့ ဘာလို့ ၀ယ်ပေးရဖို့ ပြင်ထားပေါ့ :P
ကလေးတွေဟာ ပထမဆုံး လွှမ်းမိုးခံတာကို မကျော်လွန်နိုင်ဘူး ပြောရင်ရမလား စဉ်းစားမိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါ ကလေးတွေတင် မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်တယ်။
အနုပညာရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုပဲပေါ့ နော်။ ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ လင်္ကာဒီပ ချစ်သူက ဗီလိန် (ဒသဂီရိ) ကို မင်းသားနေရာကနေ ရေးသွားတယ်။ ဗိုလ်အောင်ဒင်လဲ ဒီလိုပဲ ဗီလိန်ကို မင်းသားဖြစ်အောင် ရိုက်ခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တင်ပြပုံချင်း မတူဘူး။ လင်္ကာဒီပချစ်သူ ဖတ်တုန်းက ဒသဂီရိ ကို ခံစားလို့မရဘူး။ ဘီလူးဆိုတဲ့ အစွဲက စိတ်ထဲရှိနေတာကိုး။
ဗိုလ်အောင်ဒင်ကြည့်တော့ ဗိုလ်အောင်ဒင်ကို သနားခဲ့မိတယ်။ လက်ကိုင်ပုဝါရွေးတဲ့ အခန်းမှာ ဗိုလ်အောင်ဒင်ပဲ နိုင်စေချင်တာ။ အဲဒီရုပ်ရှင်ကို ရွှေဒုံးဘီအောင် ရိုက်တော့ ရာမဇာတ်ကိုပဲ အခြေခံခဲ့တာလို့ အဖေပြောပြဖူးတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်တမ်းကတော့ မကောင်းတဲ့သူ ကောင်းတဲ့သူ ခွဲခြားသိဖို့ လိုတယ် ထင်တာပဲ။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေအတွက် ပုံပြင်လေးတွေမှာ လူမိုက်နဲ့ လူကောင်းကို သေချာ ခွဲခြားပြကြတာ ထင်ပါရဲ့။ မဟုတ်ရင် ကလေးတွေ အမှတ်မှားကုန်မှာနော်။
သားက ခံစားတတ်နေပြီပဲ .... ကလေးတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုနဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေက စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတယ် နော် အမ... Avatar သွားပြပါလား လူကြီးတွေတောင် ရင်သပ်ရှုမောနဲ့ ကြည့်ရတာ
give mealink of that music site..
you tube မှာ ရှာကြည့်လိုက်တာ တွေ့တယ်။
ခုမှကြည့်ဖူးတော့တယ်။ သားသားကြိုက်မယ်ဆိုလဲ ကြိုက်ချင်စရာ :P
တန်ခူးသားက မြန်မာသွေးပီပီ မြန်မာတွေရဲ့ အနုပညာတွေကို နှစ်သက်တာဖြစ်မယ်။
အိမ်က သမီးကတော့ မြန်မာအစားအသောက်ကို ရေရေလည်လည် အားပေးတယ်။ လက်ဖက်သုတ်၊ ငပိချက်၊ ငပိကြော်၊ ငါးခြောက်ငါးခြမ်း၊ ဒညင်းသီးပါမကျန် စားတယ်။
Happy New Year, ama yay..
ရေချမ်းနဲ့ ရေစင်လည်း ကြိုက်တယ်...
ကျမကို ချစ်တာ ဘယ်သူလဲ...
ဆိုတာကို သူတို့က အပိုစာသားတွေပါ ထည့်ဆိုကြသေးတာ...
အဲဒီသီချင်းလေးက တော်တော်မြူးပါတယ်.. ကလေးတွေကလည်း သားစိုးတို့ ဖိုးချစ်တို့ကို ကြိုက်ကြတယ်.. ဘယ်ခေတ်မှာပဲ အနုပညာရဲ့ သက်ရောက်မှုကတော့ ကြီးမားခဲ့တာပဲနော်.. သားလေးကလည်း ဒဿမှာ သူသဘောကျတဲ့ အစွမ်းတွေရှိရက်နဲ့ သီတာက ဘာလို့ ပြန်မကြိုက်တာလဲဆိုတာ နားမလည်တာထင်တယ် ဟဲဟဲ.. သားလေးက စိတ်သဘောထား နုးညံ့တဲ့ ကလေးလေးပဲနော်..
ဒဿ သနားပါတယ်နော် မေမေ တဲ့လား...
သားလေးက စိတ်ထားလေး နူးညံ့ပုံပေါ်တယ်... ချစ်စရာ...
အင်း... ကြိုးစားပြီး ခံစားကြည့်နေတုန်းပါပဲ....
(Remix ကို ပြောတာနော်...)
အင်း ဟုတ်တယ် မမီယာပြောသလို သူ့ကို Avatar ပြသင့်တယ်။
သူ့လက်ခံနိုင်စွမ်းနဲ့ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေ တိုးစေမယ့်ဇာတ်လမ်းပါပဲ။
အဲ့သီချင်းကို ကလေးတွေကြိုက်နေတာကတော့ အဟုတ်ပဲ အန်တီရေ..း)
သားသားကို တောင်ငူ မြတ်စောညီနောင် ဘုရားက ခြင်္သေ့လေးကို ပြချင်တယ်။ သူ ဘာပြောမလဲ နားထောင်ရအောင်...
မြင်ဖူးနေကြ ခြသေ့င်္တွေနဲ့ မတူလို့။
အဓမ္မ ကို ဓမ္မ လို့ ထင်ကြရင်တော့ ဗမာပြည်မှာ အဓမ္မ ဝါဒီတွေ စိုးမိုးနေဦးမှာပဲ
ဦးချစ်ဦးညို စာအုပ်ထွက်တုန်းက ဝေဖန်ရေးတစ်ခုမှာ ပါတယ် နောင်ဆိုရင် ဒေ၀ဒတ်ဘက်ကနေပြီးမှရေးနေရင်ဆိုတာ အမှတ်ရမိတယ်
စင်စင်ရေ… မတွေ့ တာကြာပြီနော်ညီမ… ဟုတ်ပါတယ်ညီမရေ… အနုပညာဖန်တီးသူရဲ့ ရေးဖွဲ့ ပုံပေါ်လိုက်ပြီး ဖန်တီးသူရဲ့ရေးနိုင်စွမ်းပေါ်မူတည်လို့သူခေါ်ရာနောက်လိုက်သွားတတ်တာ မျက်လှည့်ပြကွက်တခုလိုပါပဲ…
အဲဒါဆို သားသားနဲ့ ဦးဦးရွာသား ခံစားချက်ချင်း တူနေပြီပေါ့…
ကိုအောင်သာငယ်ရေ… သားက ဒဿကို ပြိုင်ပွဲတခုမှာ ရှုံးနိမ့်သွားသူဆို သနားသွားတာ ထင်ပါရဲ့….
သားကြီးလာရင် ဦးဦးပိတီဆီ နှစ်ကျပ်ခွဲသင်တန်းတက်ခိုင်းလိုက်မယ်…
အဲဒီလို တွေးရင်လဲ ရပါတယ်ညီမရေ… အမတို့ တောင် များသောအားဖြင့် ပြန်ဆိုတေးတွေကို မူရင်းအဆိုတော်လောက် မနှစ်သက်မိတာအမှန်ပဲ…
ဟုတ်တယ်မေရေ… အနုပညာရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု… မေသုံးပြသွားလေး သိပ်လှပါတယ်… သားကို ရှင်းပြတုန်းက ဗီလိန်ဆိုတာ ပေါ်လွင်အောင် ရှင်းပြပါတယ်… သူ့ ရင်ထဲစွဲသွားတာက သူ့ ကို ဘယ်လိုမှ မချစ်နိုင်သူကို ချစ်မိလို့ရှူံးနိမ့်သွားတာကိုပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်…
ညီမမီယာရေ… သားက avatarကို သိပ်ကြည့်ချင်တာ… ဒါပေမယ့် သူ့ အရွယ်ကြည့်မရသေးလို့ လေ… သူကြိုက်မှာ သေချာတယ်…
Anonymousရေ… အောက်မှာ ညီမမေ ပေးတဲ့linkလေးက ကြည့်ကြည့်ပါနော်…
ဟုတ်တယ်ကိုပေါရေ… အဲလိုပြောရမှာပဲ… မြန်မာဆိုင်းဝိုင်းတို့ ဘာတို့ ဆို သိပ်စိတ်ဝင်စားတယ်… စဉ်းစားနေတာ… ဒီတခါပြန်ရင် ဇာတ်တို့ အငြိမ့်တို့လိုက်ပြရင် ကောင်းမလားလို့ .. သမီးလေးကို မြန်မာစာတွေ လာစားဖို့ ဖိတ်ဦးမယ်…
ချစ်တဲ့ညီမမြတ်နိုးရေ… same to youပါ… ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေညီမရေ…
မရေ… သူတို့ ခေတ်မို့ ထင်ရဲ့နော်… သားကတော့ စကားမပီတော့ နာပဲ…နာပဲ…နာပဲတဲ့
ဟုတ်ပါတယ် မ ရေ… သီတာက ပြန်မချစ်နိုင်တာကို သူ့ မှာ တနုံ့ နုံ့ နဲ့ ပေါ့… ကလေးတွေ ခေတ်ချင်းတူတော့ အကြိုက်ချင်းတွေ တူကြတာဖြစ်မယ်…
သက်ဝေရေ… အမှန်ပဲ…ကြိုးစားပြီးခံစားရတာနော်…တို့ လဲ အတူတူပဲ…
Cratonရေ… သူ့ လက်ခံနိုင်စွမ်းနဲ့ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေ တိုးမယ့်ဇာတ်လမ်းတွေ ပြဖို့ဆုံးဖြတ်မိပါတယ်… အကြံပေးတာကျေးဇူးပါတူလေးရေ…
ကိုတောင်ငူရေ… မြတ်စောညီနောင် ရောက်ဖူးတယ်… ဒါပေမယ့်ခြင်္သေ့တော့ မေ့တေ့တေ့…. ဒီတခါသားကို သွားပြဦးမယ်…
သားလဲ စိုင်းစိုင်းကြိုက်တယ် ပေါက်ရေ… အဲဒီလိုင်းကဆို အကုန်ကြိုက်….
ရွှေရတုမှတ်တမ်းရေ… ကျွန်မက မိခင်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်ရင်သွေးလေး လမ်းမှားလိုက်မှာတို့ အတွေးအခေါ်မှားတွေ ရသွားမှာတို့အစိုးရိမ်ဆုံးပါ… ဒီနေရာမှာ အနုပညာဖန်တီးသူရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုနောက်ကို အနုပညာခံစားရုံသက်သက် လိုက်ပါသွားတာကို ကျွန်မဆိုလိုချင်တာပါ… ဒါကြောင့်မို့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဇာတ်လမ်းအစအဆုံး သားသိသင့်တယ် ထင်လို့ရှင်းပြခဲ့တာပေါ့… သားအသက်က ငယ်လွန်းသေးတာမို့သီတာချစ်တာ မခံရတဲ့ ဒဿကို သနားစိတ်လေး ၀င်သွားတဲ့ နှလုံးသားနုနုလေးရဲ့ ခံစားချက်က လွဲရင် တခြားဘာမှ စွန်းထင်းမနေပါဘူး… ခုလို လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ…
Anonymousရေ… ကျွန်မရဲ့ point of viewကတော့ ဖန်တီးသူရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုပါ… ဗီလိန်ကို မင်းသားဖြစ်အောင် အရင်ကမုန်းခံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကောင်တယောက်ကို သနားသွားအောင် ခံစားမှုတွေပြောင်းပြန်လှန်အောင် ရေးနိုင်စွမ်းတဲ့ ဖန်တီးသူရဲ့ အနုပညာပြောင်မြောက်မှုသက်သက်ပါ…
သားသားရဲ့ ချစ်စရာအကြောင်းလေးတွေ လာထပ်ဖတ်သွားတယ် အစ်မရေ သားသား လူပျိုပေါက်ဖြစ်တဲ့အခါကျမှ ၄၀ ကျော်နေမယ့် လေးလေးမောင်မျိုးက ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ လင်္ကာဒီပချစ်သူဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပေးဖတ်အုံးမယ် ။
အင်း အမ သားသားလဲ ဒဿဂီရိ ကို သနားသကိုးးးး ဒါထက် ဂွစာမက ဘယ်သူ့ကို သနားလဲ သိလား
အမပြောတဲ့ အနုပညာဖမ်းစားမှုကို နားလည်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရွယ်က အကြိုက်တွေကိုလဲ ပြောင်းလဲစေတတ်တယ်လို့ ထင်နေသေးတယ်။ အမ ရှင်းပြတာတွေ သူကြီးလာရင် နားလည်လာမှာပါ။ ကလေးက ငယ်သေးလို့ပါ။